Medical Engineering - Luoyang sandoka tungstène-molybdène Material Co., Ltd.
Fa ny X-ray sy ny fitaovana solosaina tomographs, mpanamboatra fitaovana ara-pitsaboana mametraka ny fitokisany amin'ny anodes amin'ny toerana sy ny X-ray mikendry vita tamin'ny TZM, MHC, tungstène-rhénium alloys sy tungstène-varahina. Ny Tube sy detector singa, ohatra amin'ny endrika rotors, nitondra singa, cathode fivoriambe, emitters collimators CT sy shieldings, ankehitriny ny mafy orina anisan'ny fitarafana maoderina fizahana aretina ny teknolojia.
X-ray taratra mitranga rehefa misy decelerated elektrôna amin'ny anode. Na izany aza, 99% ny fahan'ny angovo Niova fo ho hafanana. Ny metaly dia afaka hanohitra ny mari-pana avo sy azo antoka hahazoana antoka mafana fitantanana ao anatin'ny rafitra X-ray.
N amin'ny sehatry ny radiotherapy dia manampy amin'ny famerenana ny an'aliny maro marary. Eto, marina tsara, ary hentitra tanteraka toetra tena ilaina. Ny multileaf collimators sy shieldings vita avy amin'ny tena matevina tungstène-metaly mavesatra firaka Densimet® dia tsy miala ny milimetatra avy amin'izany tanjona. Izy ireo hahazoana antoka fa ny taratra dia mifantoka amin'ny fomba fa latsaka amin'ny sela marary amin'ny hamantarana marina. Vay no tratran'ny avo-irradiation fametrahana mazava tsara raha ny ara-pahasalamana sela mbola voaaro.
Raha ny olombelona mahasoa, tiantsika ny ho amin'ny fanaraha-maso tanteraka. Ny famokarana rojo tsy manomboka amin'ny fividianana ny vy, fa ny fampihenana ny manta mba hanangana fitaovana vy vovoka. Toy izany ihany no azontsika tratrarina ny fahadiovana ara-nofo avo izay mamaritra ny vokatra. Mpanamboatra voalamina tsara isika metaly singa avy amin'ny vovoka porous banga. Mampiasa manokana dingana mamorona sy ny milina fanodinana dingana, ary koa ny fanjakana-avy-ny-coating zavakanto sy teknolojia fikambanana, mitodika ireo singa ho sarotra ny toetra miavaka indrindra performanceand.
molybdène, molybdène Rod, Tzm Sheet, molybdène Plate, molybdène Sheet, Tzm Plate,